Askar ka tirsan Ciidamada Yemen oo lagu laayay Koonfurta dalkaasi – SBC
Askar ka tirsan Ciidamada Yemen oo lagu laayay Koonfurta dalkaasi
Kooxo hubaysan oo aan la aqoon haybtooda ayaa ku dilay xarun ay Ciidamada Amniga Yemen ku leeyihiin Koonfurta dalkaasi ugu yaraan Lix Askar,waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay Askar kale oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay.
Kooxaha Mucaaradka ee Midigta u janjeera ayaa cambaareeyay weeraradaasi,waxaana ay dalbadeen in la sameeyo baaritaan lana soo qabto cidii falkaasi fulisay.
Dilka Askarta ka tirsan Ciidamada Amaanka Yemen ayaa kusoo beegmaya wakhti ay dhinaca kale sii kordhayaan tirada dadka ku dhimanaya banaabaxyada ka socda guud ahaanba wadanka Yemen.
Dhakhaatiirta Cisbitaalada Madaniga ah ee Magaalada Ticis ayaa sheegaya in ay aad u kordhayaan tirada dadka ku waxyeeloobaya rasaasta ay ciidamada Amaanku adeegsanayaan, ay yihiin kuwo ugu badan ee lasoo gaarsiinayo.
Dowlada Yemen waxaa ay iska fogaysay in ay beegsanayo shacabka banaabaxaya,waxaana ay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu cadaaweynay maamulkooda.
Wadanka Yemen waxaa uu kamid yahay,wadamada ay ka socdaan banaabaxyada ugu xoogan ee haatan ka taagan wadamada Bariga dhexe iyo weliba kuwa carabta,waxaana ay weli shacabka dalbanayaan in uu xilka isaga dego Madaxweyne Cali C/lla Saalax oo mudo aad u dheer dalkaasi ka talinayay.